DEG DEG:Tukaraq oo dagaalkii ugu cuslaa ka qarxi rabo & Xoreynta Laascaanood oo loo bahoobay kadib markii….. | Daldoon Ugu Kaalay Wararkii Ugu Danbeeyey
DEG DEG:Tukaraq oo dagaalkii ugu cuslaa ka qarxi rabo & Xoreynta Laascaanood oo loo bahoobay kadib markii…..
Apr 14, 2018 - 7 Jawaabood
Wararka Shabakadda Daldoon.com ay haatan ka helayso magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa sheegaya in mawqif adag laga qaatay dagaal culus oo ka dhaca deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool kadib markii shir weyne balaadhan uu dhex maray hogaamiyaasha dhaqanka Beelaha Dhulbahante iyo madaxda maamulka Puntland.
Shirkani oo ujeedkiisu uu ahaa hirgelinta hawlgalka xoreynta gobolka Sool ayaa waxaa lagaga hadlay intii uu socday arimo ay kamid yihiin dhamaystirka qorshayaasha dagaal ee lagu wajahayo ciidamada maamulka Somaliland iyo sidoo kale hanaanka loo marayo xoreynta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Labada dhinac ayaa dood dheer kadib isla qaatay in hal meel looga soo wada jeesto ciidamada maamulka Somaliland si looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Sool, waxaana hogaamiyaasha dhaqanka Beelaha Dhulbahante ay ugu baaqeen madaxda Puntland in ay iclaamiyaan xiliga dagaalka si sida ugu dhakhsaha badan loo dar dar galiyo hawlgalka xoreynta gobolka Sool, waxaana lagu heshiiyey in mar qudha la wada bilaabo dagaalka si awood dagaal looga qabsado ciidamada maamulka Somaliland guud ahaanba gobolka Sool.
Wixii kusoo kordha warkaasi kala soco Daldoon.com
Warkaasi Ayaa igeli kara daldoon sxb
Ugaaryahan waa in uu bustaha saaran iska rogo,Waa in ay dagaalamaan waa laandheere Aan cidna hor istaagi karin haday soo jeensadaan.
Hawd(Reer hagar,Cali geri,khaalid iyo wacays aadan) waa daraawiish,ugaasyo waa aar libaax,Jaamac siyaad waa niman rag ah haday kula joogaan iyo haday kaa maqanyihiin, barkad waa caasho Dheer, hayaag hiil malaha,qayaad waa qaran, madareemin waa magac-uyaal.
Su’aal: 1) Cali khaliif Galaydh xaguu ku danbeeyey?
2)Hotel mansuur miyuu ku xidhanyahay mise mandheera?
3)odayga baafin malaga diray sida BBC iyo voa?
mohamed sxb sidaad u dhgtay maaha dadka waa la moral jebiyey ee moralka hala dhiso cid aan ridin bahasha malihine markaad tiri jaamac siyaad waa nman raga miyaad iloowdey boqolaalka garac ee yagoori jooga waad ku digatay sxb taasaay yeeleen ilaa garaadkoodii
Maxamud waa runtaa jaamac siyaad waa cawaan zuulu ah.
WAa Reer baadiye aan aqoon lahayn.
WAa dad nolosha ka dhacay oo horgal iyo askar ah.
Dhulbahante Dagaalka ha bilaabo, Puntland wey ku khasban yihiin markaa. idinku dhexda ka bilaa Ilaa Laascaano agagaarkeeda, ama dhexdeeda, sidaas ayaa dagaal ku bilaaban karaa, maalin kasta , in aan dhahno dagaal baa dhici kara Caawa, waxba tari meyso.
Ha is kala saar saarina, kii xun soo dhoweeya, cidaasaa xun waa midda Cadowgu rabaa, Labadaa qolo ee la timaamayo soo dhoweeya.